SimplySign - မိုဘိုင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ပေါင်း - ပိုမိုမြန်ဆန်။ လုံခြုံမှုရှိသည်
SimplySign သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုခေတ်သစ်အလုပ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းက e-documents များအားလုံးသင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးနေသကဲ့သို့လျင်မြန်စွာနှင့်အဆင်ပြေစွာလက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားသည်ပိုလန်ဈေးကွက်တွင်ပထမအကြိမ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်
စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာများတွင်အလုပ်လုပ်သည်
Windows / macOS / Android / iOS ပလက်ဖောင်းများစွာတွင်အလုပ်လုပ်သည်
ဂန္ eP လက်မှတ်ရေးထိုးမှုနှင့်အတူသဟဇာတ
ခိုင်မာသော client ကို authentication ကို
အလိုအလျှောက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Adobe software ကိုအတွက်အသိအမှတ်ပြု!
အဓိကစျေးကွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု: (ဥပမာငွေပေးချေသူ / e-Declarations အစီအစဉ်)
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို / လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
SimplySign သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုခေတ်သစ်အလုပ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အသစ် - လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်ဂန္ထဝင်ကွန်ပျူတာများတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဒ်ပြားနှင့်စာဖတ်သူမပါဘဲအလုပ်လုပ်သောအရည်အချင်းပြည့်မှီသောလက်မှတ်ဖြစ်သည်။
SimplySign အရည်အချင်းပြည့်မီသောလက်မှတ်ကို ZUS မှပံ့ပိုးသူများအနေဖြင့်ကြေငြာချက်များကိုလက်မှတ်ထိုးရန်၊ e-Declarations (သို့မဟုတ်) JUS သို့တင်သွင်းသော JPK သည်လူထုဥပဒေစာချုပ်များကိုချုပ်ဆို။ အီလက်ထရောနစ်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည်။
API ကိုအသုံးပြု။ ပေါင်းစည်းမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေ
API ကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ သင်၏အိုင်တီစနစ်တစ်ခုစီကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ဖြင့်နယ်ပယ်တွင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ (API- Application Programming Interface သည်လျှောက်လွှာများအားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ )
ခိုင်မာသော 2- အချက် authentication ကို
2-factor authentication ဆိုသည်မှာသင်သိသောစကားဝှက်နှင့်သင် log in လုပ်ရန်ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည်စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီး၊ နေ့နှင့်အချိန်အတိအကျထုတ်ပေးသောကျပန်းနံပါတ်များကိုပြုလုပ်သည်။ စကားဝှက်နှင့် string ကိုက်ညီသည့်အခါ client ကို log in လုပ်ထားတယ်။
အင်တာနက်မှတဆင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပို့ခြင်းသည်အလွန်စျေးပေါ။ အဆင်ပြေပြီးသင့်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ လက်ဖြင့်ဖြည့်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ထိုးခြင်းမရှိတော့ပါ။ စာရွက်စာတမ်းများကိုလုံလုံခြုံခြုံကူးစက်ပြီးသင်လက်ခံရရှိကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုသင်အလိုအလျောက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
e-service ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်သက်သေပြနိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မှတဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များစာရင်းသည်အမြဲတမ်းတိုးတက်နေသည်။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုမေ့သွားလိမ့်မည်။
စာရွက်စာတမ်းများကိုလုံလုံခြုံခြုံကူးစက်ပြီးသင်လက်ခံရရှိကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုသင်အလိုအလျောက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ e-signature နှင့်အတူစာရွက်စာတမ်းများသူတို့လက်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့လျှင်ကဲ့သို့တူညီသောဥပဒေရေးရာအင်အားရှိသည်။ 128-256 bit data encryption သည်သင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များကိုဒေတာကြားဖြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
အောင်မြင်မှုအတွက်အဆင့် ၈ ဆင့်
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုမေ့သွားလိမ့်မည်
အင်တာနက်သည်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွနီးကပ်စေသည်။ e-signature သည်သင့်အားရုံးမှမထွက်ပဲအရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင့်ရဲ့အချိန်ကိုသက်သာစေတယ် စာရွက်စာတမ်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ လက်ဖြင့်ဖြည့်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ထိုးခြင်းတို့သည်ပျက်နေပါသည်။
အပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားမှုအတည်ပြု။ ပေးအပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကမ္ဘာ့စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
SimlySign ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သောအရည်အချင်းပြည့်မှီသောလက်မှတ် (သက်တမ်း ၁ နှစ်မှ ၂ နှစ်) သည်စျေးကွက်ရှိအဓိက ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်အညီအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကြေငြာချက်လက်မှတ်ထိုးရန် ZUS အလှူငွေပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်
e-Declaration (သို့မဟုတ်) JPK ကိုပေးပို့ရန်အတွက်အခွန်ရုံးသို့ပေးပို့သည်
UFG (အာမခံချက်အာမခံရန်ပုံငွေ) သို့ e-Declaration ကိုတင်ပြခြင်း
အီလက်ထရောနစ်လေလံနှင့်တင်ဒါများတွင်ပါ ၀ င်မှု
ePUAP ပလက်ဖောင်းအတွင်းဆက်သွယ်ရေး (ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ပလက်ဖောင်း)
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအွန်လိုင်း 24/7 အွန်လိုင်း e-Documents ကိုအချိန်မရွေးလက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းကိရိယာများ (Android နှင့် iOS) နှင့်ဂန္ထဝင်ကွန်ပျူတာများ (PC, Mac OS) နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းသည်အွန်လိုင်းစစ်ဆင်ရေးများ၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံသည် (eIDAS လိုက်နာမှု၊ ၂ ဆခွဲကိန်းစစ်ခြင်း)
အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလက်မှတ်သည်သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်သက်သေပြနိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယခုအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ဖြစ်သည်။
(ကျေးဇူးပြု၍ အစည်းအဝေးရက်စွဲကိုဖုန်းဖြင့်စီစဉ်ပါ။ )
IBS ပိုလန် Sp ။ z o ။ o
တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော Certum Partner
Kashubian ရင်ပြင် 8 311
IBS ပိုလန် sp ။ Z o ။ အို
XWEB အဖွဲ့များမှဒီဇိုင်းလုပ်သောဝဘ်ဆိုက် | IBS ပိုလန်မှလုပ်ကိုင်သည် မူပိုင်ခွင့်© 2013 - 2020 IBS POLAND |သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
သင်၏အကြိုက်များကိုမှတ်မိခြင်းနှင့်ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ "Accept" ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies အားလုံးကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။
cookie settings ကို လက်ခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာမှာ https://mobilesignature.eu ဖြစ်သည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကိုက်ညီစေရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ privacy ကိုဂရုစိုက်။ သင်၏အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လုံခြုံပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏သဘောတူခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၂၅ ရက်တွင်ဥရောပပါလီမန်နှင့်Aprilပြီလ ၂၇၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကောင်စီ၏စည်းမျဉ်း (EU) 25/2018 တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပြောင်းအလဲနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် 2016/679 / EC ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း (RODO, ORODO, GDPR သို့မဟုတ်အထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်း
၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် https://mobilesignature.eu/ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်အပြီးတွင်အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနှင့်၎င်းကိုလိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအကြောင်းကြားလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက် https://mobilesignature.eu/ , cookies များထဲမှာသိမ်းဆည်းအပါအဝင်။
ဒီ site ရှိဆောင်းပါးများတွင် embedded content (ဥပမာဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဆောင်းပါးများစသဖြင့်) ပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှထည့်သွင်းထားသောအကြောင်းအရာသည်အသုံးပြုသူသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တိုက်ရိုက်သွားရောက်လည်ပတ်သကဲ့သို့အလားတူပြုမူသည်
ဆိုက်များသည်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်၊ cookies များကိုသုံးနိုင်သည်၊ အပိုဆောင်းပြင်ပခြေရာခံခြင်းစနစ်များကိုပူးတွဲထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ embedded ပစ္စည်းနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူမှာ IBS Poland Sp ။ Z o ။ O. Plac Kaszubski 81/350 ရှိ Gdynia (၈၁-၃၅၀) ရုံးချုပ်နှင့်အတူ KRS နံပါတ် 8 အောက်ရှိစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ဖိုင်များကိုခရိုင်တရားရုံးGdańsk-Północမှသိမ်းထားသည်။ ၇။ အမျိုးသားတရားရုံးမှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ၇ ခုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန၊ ရှယ်ယာအရင်းအနှီးနှင့်အတူ NIP 311-0000471089-586-228 - ငွေပေးချေမှု - PLN 41 ။
- ကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာများပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုတစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေသည်
- အချက်အလက်များအားကိုင်တွယ်ခြင်းက https://mobilesignature.eu/ တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်ကိုပေးသည့်အချိန်ကတည်းကအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း (သို့) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတောင်းဆိုသည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ သင်ဝက်ဘ်ဆိုက် https://mobilesignature.eu/ ကိုစတင်အသုံးပြုသည့်အချိန်မှ စ၍ သင်ပရိုဖိုင်းကိုကန့်ကွက်သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲသို့ဝင်ရောက်သည့်အချိန်မှ စ၍ အချက်အလက်များ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် https://mobilesignature.eu/ သည်၎င်း၏ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများသို့သာလွှဲပြောင်းသည် (ဥပမာ၊ ပရိုဂရမ်ကုမ္ပဏီများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရရရှိရန်ခွင့်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥပမာတရားရုံးများ) ။ သင်၏ဒေတာများကိုဥရောပစီးပွားရေးoutsideရိယာပြင်ပသို့လွှဲပြောင်း။ မရနိုင်ပါ။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Personal Data Inspector သို့ biuro@ibs-24.eu သို့ "GDPR" မှတ်စုရေးပါ။
RODO ပုံစံ tag ကိုတက်ကြွသောပုံစံတစ်ခုစီသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည် (ဥပမာဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ၊ မှတ်ချက်များ)
- ပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဆိုက်မှသင်၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုသဘောတူသည်။
သင်၏ဒေတာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အခွင့်အရေးကဘာလဲ။
- သင်သည်သင်၏ဒေတာများကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ အချက်အလက်လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်၊ ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ။ biuro@ibs-24.eu သို့အီးမေးလ်ပို့။ သဘောတူစာချုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိပ်စာမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်
- သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းသည်27ပြီ ၂၇ ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်personalပြီလ ၂၇ ရက်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအထွေထွေစည်းမျဉ်းများပါပြviol္ဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်သည်ဟုသင်တွေ့ရှိပါကသင်သည် GIODO သို့တိုင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာကို processing များအတွက်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ဘာတွေလဲ?
- https://mobilesignature.eu/ သည်သင့်အချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီတရား ၀ င်လုပ်ဆောင်သည်
- စာရင်းအင်းတိုင်းတာမှုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်တရား ၀ င်အခြေခံသည်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည် အနုပညာလက်အောက်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွား။ ၆ စက္ကန့် ၁ လီတာ F GDPR,
ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် cookies များကိုသုံးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူ၏ကွန်ပျူတာ၌သိမ်းဆည်းထားသောစာသားဖိုင်များ။ ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ခြင်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကွတ်ကီးများသည်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်လုံခြုံရေးကိုအာမခံသော cookies များသာဤအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည်။ ဤ cookies များသည်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆိုသိမ်းထားသည်
အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ကြော်ငြာ၊ အခြား embedded ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအားဖြင့်အသုံးပြုသော cookies များကိုမည်သည့် cookies မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies များဟုရည်ညွှန်းသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဤ cookies များကိုမသုံးမီအသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။